Florida waa cudurka ugu badan, Hawaii waa meesha ugu dhimashada badan Dalxiiska Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Florida waa cudurka ugu badan, Hawaii waa meesha ugu dhimashada badan Dalxiiska Mareykanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • LGBTQ • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dalxiisayaasha Madaarka Miami
Duulimaadyada Florida iyo Hawaii waa hoteello buuxa oo aad u fiican. Khadadka makhaayadaha waa kuwo soo noqnoqda. Booqdaha ayaa ilooba inuu runtii ku jiro jannada COVID-19 marka uu booqanayo Qorraxda, ama Aloha Sheeg waqtigaan.
Florida waxay leedahay faafitaanka ugu dhaqsaha badan ee cudurka COVID-19 ee Dalxiis weyn oo maanta leh 25991 xaaladood oo cusub ama 1210 xaaladood halkii milyanba. 27 qof ayaa dhintay ama 1.25 milyankiiba
Hawaii waa Gobolka Dalxiiska ee Mareykanka ugu dhimashada badan iyadoo 4 dhimatay ama 2.17 milyankiiba. Hawaii waxay diiwaangelisay 845 kiis oo cusub ama 584 halkii milyan
Hawaii waa a Gobolka Dimuqraadiga, Florida a Gobolka Jamhuuriga.
Malaayiin Mareykan ah ayaa HAA ku leh fasax,…. laakiin hadda?
Runtii wax weyn kama beddeleyso fayraska COVID haddii Gobol Mareykan ah uu maamulo Jamhuuriga ama Guddoomiyaha Dimuqraadiga.
Florida iyo Hawaii ma jecel yihiin booqdayaasha geerida?
Furitaanka Gobolka Dalxiiska si kastaba ha ahaatee waxay noqon kartaa qaacido sidoo kale u furaysa Gobolka si loo diiwaangeliyo caabuqyada COVID ee sarreeya. Florida waxay u furan tahay dalxiiska, sidoo kale waa Hawaii, oo ku soo dhaweyneysa martida gacmo furan.
92% socdaalayaasha LGBTQ ee Mareykanka waa la tallaalaa. Nasiib wanaag labada Gobolba waa LGBTQ-saaxiibtinimo.
Labada gobolba waxay marba mid u tartamayaan midba midka kale dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay cidda leh dillaacii ugu xumaa ee kiisaska cusub ee COVID-19, waxayna labada Dawladood diidan yihiin inay ku baaqaan xannibaadyo macno leh oo ku saabsan warshadaha booqdaha ee lacag-kasbashada ah.
Isbarbar -dhiggu wuxuu ku saleysan yahay tirakoobka COVID 19 ee maanta ee ma aha waqti -dhaaf.
Muddo ka dib Hawaii waxay lahayd lambarka ugu hooseeya COViD-19 ee Gobol kasta. Lambarradu waxay ka hooseeyeen ugu hooseeya ilaa cabsi kadib markii xannibaadaha safarka iyo shuruudaha la beddelay horaantii bishaan.
Abriil 18, 2020, daabacaadan laga wariyay Hawaii waa la xiray aTirooyinka caabuqa COVID -19 waxay dhaafeen 100 maalin gudaheed. Toddobaadkan kaliya Hawaii waxay ku dhawaatay 1200 caabuq oo cusub maalin gudaheed, dalxiiskuna wali wuu sii kordhayaa iyada oo aysan jirin wax xaddidaad muuqda oo meesha yaal.
Hawaii waxay u furtay booqdayaasha la tallaalay bishan, iyo booqdayaasha leh tijaabo taban tan iyo Oktoobar 2020.
Maaskarada dabacsan ee Hawaii iyo shuruudaha fogeynta bulshada ee maqaayadaha, hoteellada, iyo goobaha kale ee gudaha, iyo COVID wuu sii faafayaa iyadoo dalxiisku aad u kordhayo.
Florida waxay ka fogaatay inay ka fogaato xannibaadaha badankood, waxay ku sii haysaa xayeysiiska inay tahay meel safar oo wanaagsan, COVID -na wuu is -bidayaa.
Labada gobol ee Florida, iyo Hawaii waxay wadaagaan, in faafitaanka COVID uu yahay kii ugu sarreeyey abid waqtigan oo ka baqaya dad badan oo deegaanka ah inay ku dhuuntaan guryahooda.
In kasta oo Hawaii ay weli leedahay sariiro isbitaal oo ku filan waqtigan, qolalka xaaladaha degdegga ah ee Florida waxay ku fidsan yihiin marinka hore.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Florida waxay lahayd kiisas COVID oo ka badan dhammaan 30 -ka gobol ee leh kiisaska ugu hooseeya, marka la isku daro.
Labada gobolba waxay haystaan ​​in ka badan 50% dadkooda oo si buuxda loo tallaaley, labaduba waxay ogyihiin lambarka halista inuu ku jiro xerada aan la tallaalin.
Labada Dawladoodba waxay sidoo kale u baahan yihiin dhaqaalaha dalxiiska si uu u kobco oo u guuleysto 'tixgeliyo xannibaadyo adag. Badhasaabka Hawaii Ige wuxuu dib u dhigay xoogaa xannibaadyo summad leh. Wuxuu ka rabaa makhaayadaha hadda inay iibiyaan 50% oo keliya booskooda.
Maadaama Maraykanku weli u xidhan yahay dalxiiska caalamiga ah badankiisa, labada Dawladood waxay ku tiirsan yihiin dalxiisayaasha gudaha. Dadka socotada ah ee reer Yurub ayaa lagu la'yahay Florida, halka Jabaan, iyo Kuuriya aan lagu arag maqaayadaha Hawaii, dukaamada, iyo xeebaha.
Dalxiiska gudaha si kastaba ha ahaatee wuxuu magdhaw u siinayaa khasaarahaas oo wuxuu u kobcayay sidii hore oo kale.
Si layaab leh Guddoomiyaha Ige ee Hawaii wuxuu u sheegay dalxiisayaasha in aan loo baahnayn in la safro waqtigan, Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waxay isku dayaysay inay u safarto Hawaii sida ugu macquulsan. Waxaas oo dhan waxay ku hadhaan dhegaha dhimashada.
Cudurdaarka ay saraakiishu ku sheegeen in dadka dalxiisayaasha ah aysan dhab ahaan ku dhex milmin dadka deegaanka waa wax lagu qoslo, qof walbana waa ogyahay.
Hawaii iyo Florida ayaa dhab ahaantii isu soo dhawaaday kadib markii Hawaiian Airlines iwaxay soo saartay duulimaadyo aan joogsi lahayn oo ka yimid Honolulu kuna socday Orlando.
“Sheekada inteeda kale” weli lama yaqaan. Waa wax laga naxo in xitaa laga fikiro natiijada, Nasiib darro, jumladaha qaarkood mar hore ayaa lagu qoray derbiga.
Ogosto 19, 2021 markay tahay 13:53
Halkan Hawaii, inta badan kiisaska cusubi waxay ku faafaan bulshada dhexdeeda qoysaska iyo kulannada la xiriira dalxiiska. Haddii faafitaanku ahaa meelaha dalxiiska ee ciidda loo dalxiis tago, halkii ay ka ahaan lahayd xaafadahayaga, dalxiiska ayaa mar kale la xiri lahaa iyadoo wadne garaac ah. Dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan farta ku fiiqno, laakiin annagu isma ilaalinayno booliiska maxaa yeelay way sahlan tahay in farta lagu fiiqo kuwa kale
Joan Enriquez-Noguera wuxuu leeyahay,
Ogosto 17, 2021 markay tahay 09:26
Waxay ku saabsan tahay lacagta. Hawaii wuxuu rabaa lacagta, Dadku way ka daaleen xiritaanka waxayna rabaan fasax kharash kasta ha lahaadee. Jooji safarka. Guriga joog, masaafada bulshada, xiro maaskaro, gacmo dhaq, Nadiifi, si aan taas uga gudubno oo aan nolosheena dib ugu soo celinno. Hawaii iyo Florida waxay u baahan yihiin inay xiraan albaabka oo ay nadiifiyaan ficilkooda.
raymond hoose wuxuu leeyahay,
Ogosto 17, 2021 markay tahay 06:28
ha imaan ha danayn.
Paul wuxuu leeyahay,
Ogosto 17, 2021 markay tahay 04:49
Markii la joojiyay tijaabinta dadka la tallaalay Comimg ilaa Hawaii kiisasku waxay bilaabeen inay ku soo booddo dhowr toddobaad gudahood dadka la tallaalay ayaa keenaya maqaayadaha iyo hoteellada oo hoos u dhacaya 50% ma joojin doono dadka keenaya waxay u baahan yihiin in la baaro ka hor inta aysan ku biirin Hawaii